လေးကကေ့ျောမွို့မှာရှိတဲ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ လိုအပျတဲ့အရာမြားကို လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဟနျထူးလှငျ - DailyInfo - Myanmar
အဆိုတျော ဟနျထူး လှငျ ကတော့ လကျ ရှိနှဦေးေ တျာလှ နျရေးမှာ အတ ကျကွှဆုံး ပါဝငျ လှုပျ ရှားနတေဲ့ အနုပ ညာရှငျတဈေ ယာကျပဲဖွဈပါတ ယျ။သူတကျကွှ မျးတဲ့ အနုပညာအ လုပျနဲ့ ရနျပုံငှေေ တှမြားစှာရှာေ ဖှေ ပးနတေဲ့ ဟနျ ထူးလှငျက NUG အစိုးရ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး၊ ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာနက ဦးရညျမှ နျဆီကနေ ကြေးဇူးတ ငျဂုဏျပွု လှာကိုလညျး ခြီးမွှငျ့ခံထားရသူတ ဈယောကျွ ဖဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ မှာလညျး ဟနျထူး လှငျက ကရငျွ ပညျနယျ လေးကကေ့ျောမွို့က စဈဘေးရှောငျပွ ညျသူတှအေတှ ကျ လိုအပျတဲ့ အသုံးအေ ဆာငျတှကေို လှူဒါနျးပေး ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ဟနျထူးလှငျက “လေးကေ့ေ ကျာ စဈဘေးရှော ငျမြားအတှကျ ဒီနေ့ ပို့ပေးဖွဈ။ Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ ဘုတျစာမြ ကျနှာကနေ ပွောလာ တာပဲဖွဈပါ တယျ။
Stay safe and stay strong. Much love ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ ဘုတျစာမြ ကျနှာကနေ ပွောလာ တာပဲဖွဈပါ တယျ။ဟနျထူးလှငျ ကတော့ ကရငျပွညျနယျ လေးေ က့ကျောမွို့က ရာနဲ့ခြီတဲ့ စဈေ ဘးရှောငျပွညျသူေ တှအတှကျ သှား တိုကျတံ၊ သှားတို ကျဆေး၊ ကလေး သုံးဒိုကျဘာနဲ့ အစားအေ သာကျတှေ မြားစှာကို ဝယျယူပွီး လှူဒါနျးပေး ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဆိုတော် ဟန်ထူး လွင် ကတော့ လက် ရှိနွေဦးေ တ်ာလှ န်ရေးမှာ အတ က်ကြွဆုံး ပါဝင် လှုပ် ရှားနေတဲ့ အနုပ ညာရှင်တစ်ေ ယာက်ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။သူတက်ကြွ မ်းတဲ့ အနုပညာအ လုပ်နဲ့ ရန်ပုံငွေေ တွများစွာရှာေ ဖွေ ပးနေတဲ့ ဟန် ထူးလွင်က NUG အစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဦးရည်မွ န်ဆီကနေ ကျေးဇူးတ င်ဂုဏ်ပြု လွှာကိုလည်း ချီးမြှင့်ခံထားရသူတ စ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာလည်း ဟန်ထူး လွင်က ကရင်ြ ပည်နယ် လေးကေ့ကော်မြို့က စစ်ဘေးရှောင်ပြ ည်သူတွေအတွ က် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအေ ဆာင်တွေကို လှူဒါန်းပေး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဟန်ထူးလွင်က “လေးကေ့ေ ကာ် စစ်ဘေးရှော င်များအတွက် ဒီနေ့ ပို့ပေးဖြစ်။ Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ် ဘုတ်စာမျ က်နှာကနေ ပြောလာ တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
Stay safe and stay strong. Much love ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ် ဘုတ်စာမျ က်နှာကနေ ပြောလာ တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ဟန်ထူးလွင် ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် လေးေ က့ကော်မြို့က ရာနဲ့ချီတဲ့ စစ်ေ ဘးရှောင်ပြည်သူေ တွအတွက် သွား တိုက်တံ၊ သွားတို က်ဆေး၊ ကလေး သုံးဒိုက်ဘာနဲ့ အစားအေ သာက်တွေ များစွာကို ဝယ်ယူပြီး လှူဒါန်းပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ် ဘုတ်စာမျ က်နှာကနေ ပြောလာ တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ဟန်ထူးလွင် ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် လေးေ က့ကော်မြို့က ရာနဲ့ချီတဲ့ စစ်ေ ဘးရှောင်ပြည်သူေ တွအတွက် သွား တိုက်တံ၊ သွားတို က်ဆေး၊ ကလေး သုံးဒိုက်ဘာနဲ့ အစားအေ သာက်တွေ များစွာကို ဝယ်ယူပြီး လှူဒါန်းပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။